रक्षाबन्धन बाँधिदिन घरघरमा गए पण्डितलाई २७ दिन क्वारेन्टीनमा राखिने ! – Dainik Sangalo
रक्षाबन्धन बाँधिदिन घरघरमा गए पण्डितलाई २७ दिन क्वारेन्टीनमा राखिने !
July 30, 2020 425
काठमाण्डौ – यस वर्षको रक्षाबन्धनमा घरघरमा गएर धागो बाँध्न रोक लगाइएको छ । ज्योतिष परिषद् रुकुम (पूर्व) ले विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष घरघरमा गएर धागो बाँध्न नपाइने निर्णय गरेर रोक लगाएको हो । रक्षाबन्धनको दिन सबैको घरघरमा गएर धागो बान्दा कोरोना सर्ने र सङ्क्रमण फैलने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको परिषद्का अध्यक्ष चेताराम उपाध्यायले बताए ।
Prevभारतले आजपनि धौलीगंगा बाँध खोल्दै, महाकाली तटीय क्षेत्रमा जोखिम
Nextपहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फ सञ्चालन
कोरोनाको ख,त,रा बढेपछि सरकारले नयाँ नियम लगाउंदै, गर्यो ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यस्तो पत्राचार